LEGO Cube ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်သာရနိုင်သည်
07 / 07 / 2021 07 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 349 Views စာ0မှတ်ချက် Bits N 'အုတ်, Brian Crecente, တရုတ်နိုင်ငံ, Ethan ဗင်းဆင့်, Lego, Lego CUBE, Lego Podcast တခုကို, Lego ကမ္ဘာ, Minecraft, NExT စတူဒီယို, podcast တခုကို, Roblox, Tencent, YouTube ကို
နောက်ဆုံးပေါ် Bits N 'အုတ် Podcast တခုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းငုပ်လျှိုးနေသည် Lego Cube သည်တရုတ်အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်ရည်မှန်းချက်ကြီးသောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု။
Tencent နှင့် NExT စတူဒီယိုများနှင့် တွဲဖက်၍ ဖွံ့ဖြိုးသည်။ Lego Cube က 'အပြည့်အဝ - စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ် Lego ကစားသမားများသွားလာခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သောအုတ်ကျင်းကမ္ဘာ '။ အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည် Lego ကမ္ဘာနှင့်တွေ့ဆုံသည် Minecraft Roblox နှင့်တွေ့သည်။ ၎င်းသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ပွင့်လင်းသောကစားနည်းကိုအားပေးသည့်သဲသောင်ပြင်ဂိမ်းဖြစ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုတရုတ်နိုင်ငံ beta မှာပဲရနိုင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းရင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့လွှတ်ထားတဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ပိတ်ထားတာပါ။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးဖြစ်သော Bits N 'Bricks ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်art၎င်း၏ဒုတိယရာသီအတွက်အချို့သောထင်ရှားတဲ့ - ဒါပေမယ့်နေဆဲ super- စိတ်ဝင်စားဖို့ဘာသာရပ်များသို့နစ်မြုပ်ဖို့ ing ။
ပိုမိုလေ့လာရန်အထက်ပါဗီဒီယိုပေါ်မှကစားခြင်းကိုနှိပ်ပါ Lego hosts ည့်သည်တော်များမှ Brian Crecente နှင့် Ethan Vincent မှ Cube Lego အုပ်စုနှင့် Lego ဂိမ်းများ။ Bits N 'အုတ်များနှင့်ပတ်သက်သောစာရင်းတစ်ခုလုံးကိုယခုအချိန်အထိသင်တွေ့နိုင်သည် LEGO ဂိမ်းများ YouTube ချန်နယ်.
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစုံတယောက်သောသူသည်မှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO CON သည်ယခုအခါကိုက်အရွယ်အစားများဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
Disney နှင့် Lucasfilm သည် LEGO ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည် Star Wars 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship →